ဒီနေ့ခေတ်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်နေပြီးဖြစ်သော လွဲမှားနေတဲ့ ရှေးခေတ်ပျိုးထောင်နည်းများ
Home Parenting Parent Guide ဒီနေ့ခေတ်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်နေပြီဖြစ်သော လွဲမှားနေတဲ့ ရှေးခေတ်ပျိုးထောင်နည်းများ
ဒီနေ့ခေတ်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်နေပြီဖြစ်သော လွဲမှားနေတဲ့ ရှေးခေတ်ပျိုးထောင်နည်းများ
ကလေးငယ်ပြုစုပျိုးထောင်နည်းတစ်ချို့က လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အလွန်ခိုင်မာသော ရပ်တည်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါတယ်။ ၎င်းတို့က မျိုးဆက်တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို ကူးစက်လာပြီး လူတိုင်း ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာကြတာကြောင့် ဒီပျိုးထောင်နည်းတွေကိုပဲ အသုံးပြုကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါ မျိုးဆက်သစ်လူတွေဟာ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ချို့ကို အမှန်တကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်ဟု သတိပြုမိလာကြပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ ရှေးခေတ်ပျိုးထောင်ခြင်းနည်းလမ်းတွေမှာ အသုံးမဝင်တော့တဲ့နည်းလမ်းတွေကို ဖြုတ်ချပြီး နည်းလမ်းအသစ်တွေကို အစားထိုးထားသော ပျိုးထောင်နည်းတွေကို မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ကလေးငယ်ကို ကြောက်လန့်စေခြင်းက သူတို့ကို နာခံစေဖို့ သေချာသော နည်းလမ်းဖြစ်နေခြင်း
အကြောက်တရားကို မိဘတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေ လိမ္မာစေဖို့ အသုံးချကြပါတယ်။ ဥပမာ – သား ဒီလိုစိတ်ဆိုးနေရင် မေမေအိမ်ကနေ ထွက်သွားမှာနော်၊ သား ဒါကို မစားဘူးဆိုရင် အမေနောက်တစ်ခါ ကစားကွင်းကို လိုက်မပို့တော့ဘူးစတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေက ရေတိုပြဿနာဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပြီး ကလေးတွေကို စိုးရိမ်စိတ်ရိုက်သွင်းပေးရုံပါပဲ။ အမှန်တကယ်တော့ ဒီအရာက emotional abuse ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို နာကျင်စေပြီးမှ ကြောက်စိတ်အရ နာခံတတ်စေခြင်းက ကလေးရဲ့ စိတ်မှာ ခြေရာတစ်ခုကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ခြင်းက မိဘတွေရဲ့ တဒင်္ဂစိတ်ဆန္ဒထက် သူတို့ကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူနေထိုင်ဖို့ ပိုဂရုစိုက်ရာရောက်ပါတယ်။
၂။ ကလေးငယ်ကို တစ်ခြားလူတွေရှေ့မှာ ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းက ပညာရေးမှာ ထူးချွန်စေသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း
အမူအကျင့်ကောင်းတွေရဲ့ စံနှုန်းတွေထဲက တစ်ခုက ပဋိပက္ခတွေကို တစ်ယောက်တည်းဖြေရှင်းပြီး တစ်ခြားလူတွေကို ဒုက္ခမပေးသင့်ဘူးဟု ဆိုကြပါတယ်။ သင့်ကလေးကို ဆုံးမဖို့ ကြိုးစားခြင်းက တစ်ခြားလူတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘဲ မိဘနှင့် ကလေးအကြားက အရေးကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူအများရှေ့မှာ ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းက ကလေးအတွက် နာကြဉ်စရာဒဏ်ရာတစ်ချို့ကိုသာ ရစေနိုင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုနှင့် လေးစားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
၃။ လူတိုင်းက ကလေးကို သနားကြပြီး ငြင်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး
ချစ်စရာကလေးတစ်ယောက်က တစ်ခုခုကို လိုချင်နေတယ်ဆိုရင် ငြင်းဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီအခိုက်အတန့်တွေက သင့်ရဲ့ လက်ရှိဆက်ဆံရေးနှင့် သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဟု မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကလေးက သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒမှန်သမျှကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းက သင့်ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ မြင်လာနိုင်ပြီး သင့်စေတနာတွေကို မမြင်နိုင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် ကလေးက ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွှတ်သော အစားအစာကို ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ စားသောက်လာပြီး ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်အကျွံတက်လာခြင်းနဲ့အတူ အနာဂတ်မှာ လူမှုဆက်ဆံရေးပြဿနာတွေလည်း ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
၄။ အဆင့်ကောင်းတွေက အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်သော ဘဝအတွက် အာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်ခြင်း
အဆင့်ကောင်းတွေအပေါ် ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆုပ်ကိုင်မှုတွေက တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကလေးတစ်ဦးရဲ့ အောင်မြင်မှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အချက်မဟုတ်ကြောင်း လက်ခံနေကြပါပြီ။ လေ့လာမှုတွေအရ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး၊ လူအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကဲသို့သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်လက္ခဏာတွေက ကလေးရဲ့ အနာဂတ်အလားအလာကို ခန့်မှန်းရာမှာ ပိုမိုတိကျကြောင်း လက်ခံလာခဲ့ကြပါတယ်။
၅။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစည်းမျဉ်းဆိုတာ လူကြီးတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်နေခြင်း
ကလေးတွေက ဆွေမျိုးတွေပင်ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခြားသူတွေဆီမှာ နမ်းခြင်း၊ ပွေ့ဖက်ခြင်းနှင့် ထိတွေ့ခြင်းတွေကို မလိုချင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သင့်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့ဆက်ဆံခိုင်းမယ်ဆိုရင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးအနေနဲ့ နှစ်သက်မယ်ထင်ပါသလား?
ကလေးတွေမှာလည်း လူကြီးတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ မိဘတွေရဲ့ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ကလေးတွေကို သူတို့မလုပ်ချင်တဲ့အရာကို လုပ်ဖို့ အတင်းအကြပ်ခိုင်းစေမယ့်အစား သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစည်းမျဉ်းတွေကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသင့်ပါတယ်။
၆။ သားတွေကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ဆက်ဆံရင် သူတို့ဟာ ဂေးတွေဖြစ်လာကြမယ်
ယေဘုယျအားဖြင့် ကလေးတွေနှင့် ပတ်သက်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံနမူနာမျိုးက မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်လာရင် ကလေးတွေဟာ မည်သည့်အရွယ်မဆို ကျား/မမရွေး အချစ်ခံရဖို့ ကြိုးပမ်းကြပါတယ်။ ဒီအရာက သူတို့ကို ပျော်ရွှင်စေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုပေးပါတယ်။ ကလေးကို သနားညှာတာခြင်းမပြုခြင်းက ထူးဆန်းသောအရာဖြစ်ပြီး အချစ်မခံရခြင်းက ဘယ်သူ့အတွက်မဆို လုံခြုံမှုမရှိခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် လေးစားမှုနည်းပါးခြင်းကဲ့သို့သော အနုတ်လက္ခဏာအရည်အသွေးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပါတယ်၊
၇။ မိဘတွေက ငွေရှာဖို့ အချိန်ပေးရတာ သူတို့အတွက်ဆိုတာ ကလေးတစ်ချိန်ကျ နားလည်လာလိမ့်မယ်
မိဘတွေက လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြချိန်မှာ ကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့ အဘွားတွေ၊ ကလေးထိန်းတွေနဲ့ ထားခဲ့ခြင်းက မိဘတွေရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အဖြေဖြစ်နေပါတယ်။ မိဘတွေမှာလည်း အရှုပ်ဆုံးအချိန်ဇယားတွေ၊ အရေးကြီးသောအရာတွေအတွက် အချိန်တစ်ခုပေးရသည်မှာ လူတိုင်းနားလည်ကြပါတယ်။
သို့ပေမယ့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တွေမှာတော့ ကလေးကို အပြည့်အဝအချိန်ပေးပြီး ကလေးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဦးစားပေးပါ။ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် စိုးရိမ်မှုကင်းပြီး ကောင်းမွန်သော ကလေးတစ်ယောက်ကို ပျိုးထောင်ပေးဖို့လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Previous articleသင်က မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်တွေကို အညွန့်ချိုးသူတစ်ယောက်လား?
Next articleဘေဘီလေးတွေ အရာရာသင်ယူနိုင်အောင် ကူညီပေးဖို့ မိဘတွေ သိထားသင့်တဲ့ အကြံပြုချက် (၁၂)ချက်
မိဘတွေ ဖောက်ပြန်လှည့်စားကြတဲ့အခါ ကလေးသင်ယူကြသောအရာ (၅) ချက်